ကောင်းကင်တမန်များကျွန်ပ်တို့နှင့်အစဉ်ရှိနေသည်!| The Angels Are With Us! | Real Conversion
၂၀၁၂၊ ဇန်နဝါရီလ ၈ရက်နေ့၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် သခင်ဘုရားနေ့ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
“ထိုအခါ ငါကြည့်၍ပလင်တော်မှာစသော သတ္တဝါတို့နှင့်အသက်ကြီးသူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင် ၌ကုဋေသင်္ချေမက အတိုင်းမသိများစွာသော ကောင်းကင်တမန်တို့၏ အသံကိုငါကြား၏ (ဗျာဒိတ် ၅း၁၁)။
ကောင်းကင်တမန်များအကြောင်းနှင့် ပါတ်သတ်၍အဘယ်မည်သော သင်းအုပ်ဆရာတို့၏ ဟောကြားချက်ကို မကြားခဲ့ဖူးပါ။ သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ ကောင်းကင်တမန်များအကြောင်း သိသိသာ သာထင်ပေါ် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ အဖွင့်ကျမ်းဖြစ်သော ဗျာဒိတ်၅း၁၁၌ “မရေမတွက်နိုင်လောက် အောင် ကောင်းကင်တမန်များအကြောင်း ရေးသားထားပါသည်”။ “ကုဋေသင်္ချေမကအတိုင်းမသိ များစွာသော ကောင်းကင်တမန်”ဟူ၍ ဗျာဒိတ်၅း၁၁၌ ဖော်ပြထားပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာတော်၌သာ ကောင်းကင်တမန်များအကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ အာဗြဟံသည် သူ့သားဣဇက်အဖို့ မယားယူဖို့ရန် သူ့ကျွန်အားစေလွတ်သောအခါ “ကောင်းကင်တမန်ကို သင့်ရှေ့S ၌ စေလွတ်တော်မူသဖြင့် သင်သည်ထိုပြည်မှာ ငါ့သားဖို့မယားကို ယူရလိမ့်မည်” (ကမ္ဘာဦး၂၄း၇)၌ ရေးသားဖော်ပြထားပါသည်။ ယာကုပ်သည်လည်း ခရီးသွားစဉ်တွင် “ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင် တမန်”တို့နှင့် ဆုံတွေ့ခဲ့သည်။ (၁၆၉၇-၁၇၇၁ခုနှစ်) ဂျွန်ဂီလ်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ ကောင်းကင်တမန် များသည် အုပ်စုနှစ်ခုကွဲပြားပြီး သူ့ကိုကူညီမစခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ အုပ်စုတစ်ခုသည် သူ့ရှေ့၌ ဦးဆောင်၍ကာကွယ်ပြီး ၊နောက်အုပ်စုတစ်ခုမှာ သူ့နောက်ကနေ ကာကွယ်မစပေးလျှုက်ရှိ သည်(ကမ္ဘာ၃၂း၁-၂)။ သောဒုံမြို့နှင့်ဂေါမောရမြို့ မီးဘေးအန္တာရယ်ကျရောက်စဉ်တွင် လောတတို့မိ သားစုကိုလက်ဆွဲ၍ မြို့ပြင်သို့ထုတ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ (ကမ္ဘာ ၁၉း၁၅-၁၇)။ ခြင်္သေ့တွင်းထဲသို့ ဒံယေလကိုတွန်းချသောအခါ၊ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ကောင်းကင်တမန်တို့ကို စေလွတ်၍ “ခြင်္သေ့ နုတ်ကို ပိတ်ထားခဲ့သည်” (ဒံယေလ ၆း၂၂)။ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဝေငှ၍ ၊တမန်တော်တို့ကို ထောင်ထဲလှောင်စဉ် “ညဉ့်အခါထာ၀ရဘုရား၏ ကောင်းကင်တမန်သည် ထောင်တံခါးကို ဖွင့်ပြီးလျှင် ထိုသူတို့ကိုနုတ်၍ သင်တို့သွားကြလော”hဟု (တမန်၅း၁၉-၂၀)၌ ဖြေလွတ်ခဲ့သည်။ တမန်တော်ရှင် ပေတရုထောင်ထဲလှောင်ထားစဉ် ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်လာ၍ ရှင်ပေတရုအားဖြေလွှတ်ခဲ့ပါ သည်(တမန်တော် ၁၂း၇-၁၀)။
ကောင်းကင်တမန်များသည် သူငယ်တော်ယေရှုအား ဆောင်ယူပြီးလျှင် အဲဂုတ္တုပြည်သို့ပြေးရန် ယောသပ်အားဆိုလေ၏ (ရှင်မဿဲ ၂း၁၃-၁၄)။ မာန်နတ်၏ စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကို တော၌ ယေရှုခံပြီးနောက်တွင်၊ “ကောင်းကင်တမန်တို့သည် ချဉ်းကပ်လျှက် လုပ်ကျွေးကြ၏” (မဿဲ ၄း၁၁)။ ခရစ်တော်ယေရှုသည် အပြစ်သားများအဖို့ ချွေးသည်သွေးအဖြစ် ပြောင်းလဲစီးဆင်းသည့်တိုင် ဂေသရှေမန်ဥယာဉ်၌ ခံစားရသောအခါ၊ ကောင်းကင်တမန်သည် ထင်ရှားလာ၍ ကိုယ်တော်ကိုအား ပေးရ၏(လုကာ၂၂း၄၃-၄၄)။ ကောင်းကင်တမန်များသည် ခရစ်တော်၏သင်္ချိုင်းဂူ၌ ပိတ်ထားသော ကျောက်ကိုလှိမ့်လှန်ပြီး၊ သင်္ချိုင်းတော်သို့ အကြည့်အရှုလာကြသော အမျိုးသမီးတို့အား ဤအရပ်၌ မရှိ။ မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူပြီဟု မိန့်ဆိုသည် (ရှင်မဿဲ၂၈း၂၊ ၅-၆)။ အထောင်အသောင်းမကသော ကောင်းကင်တမန်များသည် ခရစ်တော်သခင် ကောင်းကင်ဘုံသို့တက် ကြွတော်မူရန် အတူလိုက်ပို့ပေးကြသည် (ဆာလံ ၆၈း၁၇-၁၈၊ဧဖက်၄း၈)။ သန့်ရှင်းသောကောင်း ကင်တမန်များသည် ခရစ်တော်ဘုရားနျင့်အတူ ဒုတိယအကြိမ်ဆင်းသက်ကြွလာပါလိမ့်မည် (လုကာ ၉း၂၆၊၂သက် ၁း၇)။ ဒေါက်တာဂျွန်ဂီးလ်၏ A Body of Doctrinal Divinity, The Baptist Standard Bearer, n.d., volume I, pp. 262-268. တွင်ကြည့်ဖတ် ပါ။
ထို့အပြင် ဘုရားရှင်၏လူများအဖို့ ကောင်းကင်တမန်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် သမ္မာ ကျမ်းစာ၌ အထင်အရှားရှိပါသည်။ ဘုရားရှင်၏လူများကို အစဉ်ကွယ်ကာ၍ ဘေးအန္တာရာယ်မှလွတ် မြောက်စေကြသည်။ “သွားလေရာရာ၌ သင့်ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ၊ ကောင်းကင်တမန်တို့အား သင့်အဖို့ မှာထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ သင်၏ခြေကိုကျောက်နှင့် မထိခိုက်စေခြင်းငှါ၊ သူတို့သည် သင့်ကိုလက်နှင့်မစချီပင့်ကြလိမ့်မည်” (ဆာလံ၉၁း၁၁-၁၂)ဟူ၍ မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ “ဘုရားသခင် သည် ကောင်းကင်တမန်ကိုစေလွတ်၍ ကယ်တင်တော်မူပြီ” (ဒံယေလ ၃း၂၈)၌လည်း မိန့်တော် မူပါသည်။ “ကောင်းကင်တမန်များတို့သည်၊ ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကို အမွေခံလတံ့သော သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းငှါ၊ စေလွတ်တော်မူသော အစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော” (ဟေဗြဲ ၁း၁၄)၌လည်း မိန့်တော်မူထားပါသည်။ ဒေါက်တာ ဟင်နရီစီတီဆန်၏ Introductory Lecture in Systematic Theology, Eerdmans Publishing Company, 1971 edition, p. 205 တွင်ဖတ်ကြည့်ပါ။
(မကြာခဏ) ကျွန်ပ်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ကောင်းကင်တမန်များ၏ လုပ်ဆောင် ချက်ကို တွေ့မြင်ရကြပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ယနေ့ကောင်းကင်တမန်များနှင့် ပါတ်သတ် သောတရားဒေသနာတော်ကို မကြားရကြသနည်း? ကျွန်ပ်ကိုယ်တိုင်လည်း ကောင်းကင်တမန်များ နျင့်ပတ်သက်သော တရားဒေသနာတော်အား ကျွန်ပ်၏သင်းအုပ်ဆရာ ဟောကြားခဲ့ခြင်းကိုမကြား ခဲ့ဖူးပါ။ မိတ်ဆွေ သင်ကောကြားဖူးပါသလား? ယနေ့တွင် ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်း ကား၊ အဘယ်သို့နည်း? အကြောင်းပြချက်များစွာရှိမည်ဟု ကျွန်ပ်ထင်မိပါသည်။ ပထမအနေဖြင့် များစွာသော သင်းအုပ်ဆရာများသည်လည်း အသစ်သောအသက်တာ၌ မပြောင်းလဲကြ၍ဖြစ်မည်။ ဒုတိယအနေဖြင့်အများသော သင်းအုပ်ဆရာတို့သည် အသစ်သောအသက်တာ၌ ပြောင်းလဲကြသော် လည်းအမှုတော်အတွက် ဘုရားရှင်ခေါ်သောသူများ မဟုတ်ကြ၍ဖြစ်မည်။ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ ပထမတရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ ကျွန်ပ်၏လက်ဦးသင်းအုပ်ဆရာကပြောကြားရာတွင်၊ “နောက်ဆုံး သောနေ့ရက်၌ အထီးကျန်ဆန်စွာ တစ်ကိုယ်တည်းအသင်းတော် ဘုရားကျောင်း၌ ကျန်ရစ်နေခဲ့ခြင်း သည် သင်းအုပ်ဆရာ၏ တာဝန်မဲ့ခြင်းကြောင့်တော့မဟုတ်နှိုင်ပါ။ သို့သော်လည်း ဘုရားရှင်၏ (ခေါ်သံကိုကြား၍) သံတော်ဖြင့် အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်၊ အသင်းတော်တပါးပါး၏ စေလွတ်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊ မည်ကဲ့သို့ ဘုရားသခင်သည် သူ၏တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် သတင်းစကားအတွက် သူ့အားအသုံးပြုမည်နည်း? (Timothy Lin, Ph.D, The Secret of Church Growth, First Chinese Baptist Church, 1992, pp.21-22) .
အသစ်သောအသက်တာ၌ အသစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲသော သင်းအုပ်ဆရာမဟုတ်ပါက၊ သူသည် အမှုတော်အတွက် ဘုရားရှင်ခေါ်သောသူမဟုတ်နိုင်၊ “ဘုရားသခင်း၏အလိုတော်ကို သင်တို့အားအ ကုန်အစင်ဟောပြောပြသခြင်းအမှူကို ငါသည်မရှောင်ဘဲပြုခဲ့ပြီ” (တမန်၂ဝး၂၇) ဟူသော အကြောင်း အရာကို တွေ့မြင်မည်မဟုတ်ပေ။ ကနေ့၊ တရားဟောပလင်ထက်က၊ ကောင်းကင်တမန်နှင့်နတ်ဆိုး များအကြောင်းကို ကျွန်ပ်တို့ကြားရခြင်းသည် ဒုတိယအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါမည်ဟု ကျွန်ပ်ထင်မိပါ သည်။ ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ထိုအကြောင်းကို များများစားစား ဟောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပေ! ယနေ့ အမှုတော်ဆောင်များသည် လူသားနှင့်စိတ်ခံစားချက်ဆိုင်ရာကို အလေးပေးဟောကြားကြပြီး-ဘုရားသခင်အကြောင်းနှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာကို ဦးစားမပေးကြပေ။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက တယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် မြောက်ဖက်ပိုင်းရှိ အသင်းတော်၌ ကောင်းကင်တမန်များအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်သည်ဟောကြားခဲ့ပါသည်။ ဒေါက် တာတီဆန်၏ စာအုပ်ထဲကကောက်နုတ်ပြီး ဟောကြားတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ သည်။ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်လူသားများအား ခရစ်တော်သခင်ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်လာဖို့ တိုးလျှိုးတောင်း ပန်ရင်းဒေသနာတော်ကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။ နောက်တနေ့တွင် အသင်းတော်ဆရာက ကျွန်ပ်အား အသင်းတော်လူကြီးများ aUရှမှောက်တွင် တိုက်ခိုက်ပြောဆိုသည်မှာ “အစွဲအလမ်းယုံကြည်သူ” ဖြစ်၍ “ကောင်းကင်တမန်များကို ကိုးကွယ်သူ” (ကောလော ၂း၁၈)ဟု စွပ်စွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအရာ သည် အဓိပ္ပာယ်မဲ့သော စကားတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဘုရားကိုရိုသေလေးစားခြင်းမရှိသော သူ၊ တဖက်ကိုတိုက်ခိုက်ဝေဖန်သောသူ၏ အပြစ်များကို ကျွန်ပ်၏ဒေသနာတော်၌ ဖော်ပြထားသဖြင့် ကျွန်ပ်အား “အစွဲအလမ်းအလွဲယုံကြည်သူ” ဟုခေါ်ကြသည်! ကျွန်ုပ်လည်း ထိုအသင်းတော်မှ စွန့်ခွာသွားလိုက်၏။ နောက်နှစ်နှစ်ကြာသောအခါ၊ ကောင်းကင်းတမန်များသည် ဘုရားသခင်၏ လျို့ဝှက်တမန်များဖြစ်သည် ဟူသောစာအုပ်ကို ဘီလီဂရေဟမ်က ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဘီလီဂရေဟမ်၏ စာအုပ်ထဲ၌ ကျွန်ပ်အားအစွဲအလမ်းအလွဲ ယုံကြည်သူ”ဟူ၍ အခေါ်ခံရသော ကျွန်ပ်ဟောကြားခဲ့သော အကြောင်းအရာများစွာ ပါဝင်ပါသည်။ “ဤစာအုပ်သည် အစွဲအလမ်းယုံကြည်မှုဖြစ်သလား?”ဟူ၍ မှတ်ချက်နှင့်အတူ ဘီလီဂရေဟမ်၏ စာအုပ်မိတ္တူကို ထိုဆရာဆီသို့ပို့ပေးခဲ့၏။ ကျွန်ပ်ဆီသူဘယ်တော့မှ ပြန်စာမရေးခဲ့ပါ။ များမကြာမီ ထိုသင်းအုပ်ဆရာသည် သူ့အသင်းသူတစ်ဦးနှင့်ပြစ်မှားခဲ့ပြီး အသင်းတော်မှသူ့ အားအနားပေး လိုက်ကြသည်။ ယောကျာF;နှင့်ပါတ်သတ်သော တရားဟောခြင်း၌ ထိုဆရာသည်တိုက်ခိုက်ပြောဆိုနေ သော်လည်း ကျွန်ပ်ဟောကြားခြင်း၌ ဘာဆိုဘာပြဿနာမှမတက်ခဲ့ချေ။
ဘီလီဂရေဟမ်၏ ထုတ်ပြန်ထားသောစာအုပ်များကို သဘောမတူနိုင်ဖြစ်ခြင်းသည် ကောင်းကင် တမန်တော်နှင့်ပါတ်သတ်သော သူ၏စာအုပ်ပင်ဖြစ်သည်။ အဲဒီစာအုပ်၌ ဘီလီဂရေဟမ်က “ဘုရား သခင်က ကျွန်ပ်တို့ကို သမ္မာကျမ်းစာအားဖြင့်သာ စကားပြောသည်” ဟုပြောခဲ့သည်။ ဤအကြောင်း ကိစ္စနှင့်ပါတ်သတ်၍ ခေတ်အဆက်ဆက် ဓမ္မဗေဒပညာရှင်များက “ကောင်းကင်တမန်များအကြောင်း လေ့လာခြင်း” ဆိုင်ရာကို အရေးကြီးလေ့လာခဲ့သည်။ (ကောင်းကင်တမန်များနှင့်ပါတ်သတ်၍ မှန်ကန် သောခံယူချက်များ)။ ဓမ္မဗေဒပညာရှင်များက “ဓမ္မဗေဒဆိုင်ရာစာအုပ်များ၌ တန်ဖိုးသားရေးသားခဲ့ကြ သည်။ (ibid., p 18).
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား မာတင်လုသာက “ကောင်းကင်တမန်များသည် ခန္တာကိုယ်မရှိသော ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းသောသတ္တပါဖြစ်၍ အသင်းတော်ခေတ်ကာလကို ထောက်မကူညီရန်ဖြစ်သည်။ (Graham, ibid., p. x) ။ ဂျွန်ကယ်ဗင်က၊ ၎င်း၏ Institutes of the Christian Religion., စာအုပ်၌ ပြော ကြားခဲ့သည်မှာ ကောင်းကင်တမန်များသည် နေရာအရပ်ရပ်အသီးသီး၌ ရှိသော လူအသီးသီးတို့အား ကူညီမစရန် ဘုရားရှင်၏အမှုကို ထမ်းဆောင်နေကြသူများ ဖြစ်သည်ဟုဆို၏။ (ရက်ရောစွာ)။ ထို ကောင်းကင်တမန်တို့သည် ကျွန်ပ်တို့အားလုံခြုံမှုကို ပေးသည်။ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသည်။ လမ်းညွန်ကြားပေးသည်။ မကောင်းဆိုးဝါး၏ တိုက်ခိုက်မှုမှကြံ့ခံစွာ စောင့်ရှောက်ပေးသည်။” (Graham, ibid.) ။ “တရားဟောမင်းသားကြီး” စပါဂျန်ကလည်း “သူ့၏ကောင်းကင်တမန်များအား သင့်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်နှင့် သင်၏လမ်းခရီးကို ညွန်ကြားပေးရန်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ပ်တို့အားသန့်ရှင်း မြင့်မြတ်သည့်အတိုင်း မိမိကိုယ်ကို မိမိစောင့်ရှောက်တတ်ရန် သွန်သင်ပေးသည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ဘုရားရှင်ကလည်း သူ၏ကောင်းကင်တမန်များအား ကျွန်ပ်တို့သွားလာခြင်း၌ အနှောက်အယှက် အတားအဆီးဘေးရန်မှ ကာကွယ်ရန်စေလွတ်ပေးသည်” (C. H. Spurgeon, “'Angelic Protection in Appointed Ways,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications,1978 reprint, volume 52, p. 20).
သို့ပါသော်လည်း ဤဂတိတော်နှင့် စပ်ဆိုင်သောကောင်းကင်တမန်များ ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ခြင်းဟူသည် ရွေးကောက်သောသူတို့အဖို့သာ တည်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ရွေးချယ်သော သူတို့ထဲ၌သင်မပါပါက ဘုရားရှင်၏ ကာကွယ်ခြင်း(သို့)ကောင်းကင်တမန်၏ ကာကွယ်စောင့် ရှောက်မှုခံရမည်မဟုတ်ပါ။ အကာအကွယ်မဲ့လျှက် မုန်တိုင်းထဲသင်ပါသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကယ်တင် ခြင်းရရှိဖို့ နည်းလမ်းတခုတည်းသာရှိသည်။ သင်သည်နောင်တရလျှက်၊ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ယေရှု ခရစ်တော်ထံသို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ရပါမည်။ “ကောင်းကင်တမန်၏ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်ကိုခံရ ပါသော်လည်း ထိုသို့ပြောင်းလဲသောသူများပင်လျှင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ ခဲယဉ်းလှပါသည်။” (၁ပေ ၄း၁၈)။ “ဘုရားရှင်ကို မကိုးကွယ်သောသူ၊ အပြစ်ထင်ရှားသောသူသည် အဘယ်မှာပေါ်လိမ့်မည် နည်း? (I Peter, ibid) မီးနှင့်စစ်ဆေးသောအခါ မယုံကြည်သောသူတို့သည် ထာ၀ရပူလောင်ခြင်း မီးငရဲဒဏ်ကိုခံရကြမည်! ခရစ်တော်သခင်ထံတိုးဝင်လာဖို့ ကျွန်ပ်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ သခင်ထံတိုး ဝင်ချည်းကပ်ပြီး သင့်အပြစ်များကို ဆေးကြောသန့်စင်လိုက်ပါ! ဘုရားသခင်၏ အပြစ်တရားစီရင် ခြင်းမှ သင့်အပြစ်များကို ခရစ်တော်ယေရှု၏အသွေးတော် ဆေးကြောသန့်စင်နိုင်ပါသည်။ သင့်အ ပြစ်ဒဏ်မှ ယေရှုသခင်ထံတိုးဝင်ပြီး ကယ်တင်ခြင်းကိုခံယူလိုက်ပါ! ထို့နောက် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်တမန်များသည် သင့်အဖို့ဖြစ်လာပါမည်။ သင့်အားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမည်။ “သင့်အသက်တာခရီး”၌ မစပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ကယ်တင်ခြင်းမရဘဲ ထိုသို့ဖြစ်လာမည်မဟုတ်ပါ! ထိုသို့အရင်ဖြစ်မလာပါ! ထိုသို့အရင်ဖြစ်မလာပါ! စောင့်ဆိုင်းမနေပါနဲ့! အခုပင် ခရစ်တော်သခင် ထံတိုးဝင်ပါ၊ သင့်အသက်ပျို ရွယ်စဉ်ပေါ့
မာတင်လုသာသည် အသက်၂၉နှစ်၊အရွယ်တွင် ဘာသာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သမားတစ် ဦးဖြစ်လာခဲသည်။ အသက်၃၃နှစ်အရွယ်တွင် ဘာသာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာဖို့ စတင်လှုပ်ရှားလာ ခဲ့သည်။ အခုပင် ခရစ်တော်သခင်ထံတိုးဝင်လှည့်ပါ။ သင်အသက်နုပျိုစဉ် သခင်ထံတိုးဝင်ပါ၊ မာတင် လုသာကို ကောင်းကင်တမန် စောင့်ထိန်းကာကွယ်ထားသကဲ့သို့ သင့်အားလည်း ကာကွယ်ပါလိမ့် မည်။ မာတင်လုသာက ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
ကျွန်ပ်တို့အတူ ကောင်းကင်တမန်များ၊ ရှိနေသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ တဦး တစ်ယောက်ကမှ သံသယပွားစရာမလိုပါ။ အခုအသက်ရှင်စဉ် ကျွန်ပ်တို့အားကာ ကွယ်စောင့်ရှောက်နေပါသည်။ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်လျှက် လမ်းမှန်ကိုညွန်ပြ ပေးနေပါသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးများကို သင်ယူနိုင်ကြ သည် အကြောင်းမှာ မြင်မရနိုင်သောအကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်းကျွန်ပ်တို့အနား ၌ ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ကောင်းသောကောင်းကင်တမန်များ ဖြစ်ကြသ ဖြင့် သူတို့သည်သစ္စာရှိကြပြီး စေတနာရှိကြသဖြင့် ကျွန်ပ်တို့၏မျက်မြင်မိတ်ဆွေ များနှင့်ပေါင်းဆက်ဆံရာတွင် အလွန်အင်မတန် ထောက်မပေးသည်။ ကောင်းကျိုး ချမ်းသာဟူသမျှသည် ကောင်းသောကောင်းကင်တမန်များ၏ မစမှုဖြစ်သည်။ (What Luther Says, Concordia Publishing House,1994 edition, p.23; comments on Genesis 24;5-7)
အမှန်တကယ်စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများနှင့်အတူ ကောင်းသောကောင်းတမန် များရှိနေသည်ကို သိကြသည်။ မကြာသေးမှီက (Fundamental Baptist Pastor) တဦးကကောင်း ကင်တမန်သည် ကျွန်ပ်၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သည်ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ သူပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ကောင်းကင်တမန်များကသာ ငါ့ကိုမစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါက ကျွန်တော်သည် သေသည်မှာကြာလှ ပါပြီ” ဟူ၍ ကြောကြားခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ပ်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် ကောင်းကင်တမန်၏ မစခြင်းကိုမှတ်မိနေဆဲပါ။ လော့စ်အိန်ဂျယ် လိတ်မြို့လမ်းမပေါ် ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်မှုမှ ကာကွယ်ခဲ့သည်။ ပထမအကြိမ်၊ ပထမတရုတ်နှစ် ခြင်းအသင်းတော်အစည်းအဝေးသို့ အသွားလမ်းပေါ်၌ မစမှုကိုခံခဲ့ရသည်။ မိုးဖွဲ့ဖွဲ့လည်းရွာနေသည် ရေဒီယိုအသံကိုနားထောင်ယင်းမောင်းနေသည်။ ကျွန်ုပ်ရှေ့ကကားသည် ကျွန်ပ်မောင်းနှင် နေသော လမ်းကြောပေါ်၌ ဝင်လာပြီး ဘရိတ်ကို နှင်းလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တော့ဘရိတ်ကို မအုပ်မိလိုက်ပါ။ ကျွန်ပ်ကားမှာချာလည်ပတ်လည်တော့သည်။ လမ်းဘေးစောင်းလျော့၌ ရှိသောပိုက် လုံးခေါင်းသို့ ကားထိုးရောက်သွားသည်။ ထိုပိုက်ခေါင်းကိုမမြင်တော့ပါ။ သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ပတ်ချာ လည်နေသည်။ သေရတော့မည်ဟု ကိုယ့်ကိုကိုရိပ်မိသည်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကားရုတ်တရက်ရပ်တန့်ခဲ့ သည်။ ကားသည်စောက်ထိုးကျနေပါသည်။ မိုးလည်း၊ သည်းထန်စွာရွာနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ကား ထဲက ရေဒီယိုလည်းဆက်လက်ပြီး ဖွင့်နေဆဲပါ။ ကျွန်ုပ်ပိတ်လိုက်သည်။ တိတ်ဆိတ်စွာဖြင့် မိနစ်အတော်အ ကြာငေးထိုင်နေခဲ့၏။ ထိုအချိန် ကောင်းကင်တမန်များ၏ အသံကိုကြားသ ယောင်ဖြစ်သည်။ ထိုနောက်ကားကို အနေမှန်ပြန်တည်လိုက်ပြီး ဆုတောင်းအစည်းဝေးသို့ ဆက်သွားခဲ့သည်။ ထိုနေရာသို့ ရောက်သောအခါ ကျွန်ုပ်ဆုမတောင်းဖြစ်ပါ။ ကျွန်ပ်လက်များတုန် ရီနေသည်။ ကျွန်ုပ်တကိုယ်လုံး လေးလံထိုင်းနေသည်ကို ခံစားခဲ့ရ၏။ သို့သော်လည်း ၎င်းကျမ်း ပိုဒ်ကို စိတ်နှလုံးထဲ၌ သတိရနေ ပါသည်။
“သွားလေရာရာ၌ သင့်ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ၊ ကောင်းကင်တမန်တို့အား သင့်အဖို့မှာ ထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ သင်၏ခြေကိုကျောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းငှါ၊ သူတို့သည်သင့် ကို လက်နှင့်မစချီပင့်ကြလိမ့်မည f(ဆာ ၉၁း၁၁-၁၂)။
ဒုတိယအကြိမ် လမ်းမထက် အဖြစ်အပျက်ကိုလည်း စိတ်ထဲအမှတ်ရှိနေဆဲပင်ဖြစ် သည်။ ၎င်းကစနေနေ့ညဉ့်နက်အချိန်တွင် ဖြစ်သည်။ မစ္စတာဂန်ဝီလ်ကာဆန်နှင့် ကျွန်ပ်တို့နှစ် ယောက်သည် ပထမတရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၌ အတူတူရှိခဲ့သည်။ သူသည် စာစောင်စာစီစာ ရိုက်နေသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဘုရားကျောင်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်နေသည်။ နောက်တစ်ပတ် ကလေးများ တွက်တရားဒေသနာတော်ကိုလည်း ပြင်ဆင်နေရသည်။ ၎င်းစာများရိုက်ပြီးနောက် လော့အိန်ဂျယ် လိတ်မြို့ ပါဆာသနားတိုက်ခန်းသို့ မစ္စတာဝီကာဆန်ကို ကျွန်ပ်ကားဖြင့်ပြန်ပို့ခဲ့သည်။ ကျွန်ပ်၏ ကားမှာ ကားအိုဖြစ်သဖြင့် ဂစ့်တိုင်းတာကိရိယာလည်း အပျက်ပင်ဖြစ်သည်။ အိမ်ကိုရောက်ရှိဖို့ဆီ လုံလုံလောက်လောက် ရှိသေးသည်ဟုထင်မိသည်။ တကယ်တော့ ဆီမလုံလောက်ခဲ့ပါ။ အပြန် လောစ့်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့ ဆောက်ဘုန်းပါဆာဒနာ၊ ဒေါက်တာအားကစားခန်း အနောက်လမ်းမပေါ် ကားမောင်းရင်းဒီဇယ်ပြတ်ခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင် ပါဆာဒနာလမ်းမကြီးဟာ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့ ရဲ့ရှေ့အကျဆုံးလမ်းမကြီးပေါ့။ အဲဒီရှေ့အကျဆုံး မီးပွိုင့်မရှိတဲ့လမ်းမကြီးဟာ ရှေ့အကျဆုံးဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင် အမြန်နှုန်းအနှေးဆုံးဖြင့်မောင်းနှင်ရတဲ့ လမ်းမကြီးဖြစ်နေပြီ။ ပါဆာဒနာလမ်းမကြီးဟာ မျဉ်းကွေးအများဆုံး၊ စောင်းလျှော့မရှိဆုံးလမ်းမအဖြစ် ထင်ရှားကျော်ကြားနေလေပြီ။ ၎င်းလမ်းမဟာ အရှိန်လျော့မောင်းနှင်ရသော လမ်းမကြီးဖြစ်လာသည်။ လမ်းဘေးဝဲယာဘက်သည်လည်း ကျဉ်းလွန်း သောလမ်းဖြစ်ပါသည်။ အရေးပေါ်ဖြတ်သန်းဖြတ်လာဖို့ အလွန်အင်မတန် ကျဉ်းမြောင်းလွန်းသော လမ်းမတစ်ခုဖြစ်နေလေပြီ။ ကျွန်ပ်ကတော့ ဆောက်ဘုန်းလမ်းကြားထဲမောင်းနှင်နေသည်။ တစ်လမ်း မောင်းလမ်းဖြစ်၍ နောက်ပြန်ဆုတ်မရဖြစ်နေခဲ့သည်။ ကျွန်ပ်ကားမှာဆီကုန်သွားသဖြင့် ရပ်တန့်နေခဲ့ ၏။နောက်မှကျော် တက်လာသောကားသည် ရပ်တန့်နေသော ကျွန်တော့်ကားကို ဝင်တိုက်တော့၏။ ကျွန်ပ်လည်းကြောက်ရွံ့၍ အော်လျှက်ကားပေါ်မှ ခုန်လျှက်ပြေးခဲ့၏။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် ကား ဟွန်းသံကိုကြားခဲ့ရ၏။ လမ်းမကြီးဘေးနားက လူငယ်လေးတစ်ယောက်သည် သံဇကာကာရံထား သောအတွင်းထဲကထွက်လာခဲ့သည်။ ရေကန်၌ငါးများမျှားသလို ဆီပုံးကိုသံချိတ်ဖြင့် ချိတ်ဆွဲလျှက် ထွက်လာခဲ့သည်။ ထိုနောက်တွင် ထိုလူကလေးသည် ဆီကုန်နေသော ကျွန်ပ်၏ကားကိုကြိုး အရှည်ဖြင့်ဘီးလုံးရစ်သကဲ့သို့ ရစ်လျှက်ဆီဖြည့်ပေးခဲ့သည်။ ထိုကလေ”မြန်မြန်ဆီလောင်းထည့်ပါ” ဟူ၍ ပြောခဲ့သည်။ ဆီတိုင်ကီကိုဖွင့်ပြီး ဆီဖြည့်အပြီး မျှားပမာအကောက်ကို သူ့အားပြန်ပေးခဲ့၏။ အိတ်ထဲကငွေကိုယူ၍ သူ့ကိုပေးလိုက်သည်။ ထိုကလေးက “မစိုးရိမ်ပါနဲ့” ဟူ၍ အားပေးစကား ပြောခဲ့သေး၏။ ကားပေါ်တက်၍ မြန်မြန်မောင်းပါတော့ဟုပြောခဲ့သည်။ အဲဒီလိုအဖြစ်များအတွက် မစိုးရိမ်ပါနဲ့ “ဒီလိုပဲညတိုင်းကျွန်ပ်လုပ်ဆောင်နေသူပါ” ဟုပြောခဲ့သေး၏။ ကျွန်ပ်လည်းကား ပေါ်မြန်မြန်တက်ပြီး မောင်းထွက်တော၏။ “ ဒီလိုပဲ ကျွန်ပ်ညတိုင်းလုပ်ဆောင်နေသူပါ” ဟူသော စကားက ကျွန်ပ်အားရိုက်ခတ်နေသည်။ ကျွန်ပ်၏ဆံပင်မွှေးညှင်းထလောက်ထိတိုင် ၎င်းကျမ်း ပိုဒ်ဖော်ပြချက်များကို စဉ်းစားနေမိခဲ့၏။ “အချို့သောသူတို့သည် ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုသည်တွင် ကောင်းကင်တမန်တို့ကို အမတ်တမဲဧည့်ခံကြပြီ(ဟေဗြဲ၁၃း၂) သူ့ကို ကျွန်ုပ်ဧည့်ခံနေခြင်းမဟုတ်ပါ သို့သော်လည်းအမှန်တကယ်ပင် ကျွန်ပ်အားမစခဲ့ပါသည်။
“သင်သွားလေရာရာ၌ သင့်ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ၊ ကောင်းကင်တမန်တို့အား သင့်အဖို့မှာထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ ၊သင်၏ခြေကိုကျောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းငှါ သူတို့သည် သင့်ကိုလက်နှင့် မစချီပင့်ကြလိမ့်မည် (ဆာလံ ၉၁း၁၁-၁၂)။
ကျွန်ုပ်သည် လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်အတွေ့အကြုံအားဖြင့် တရားဒေသနာတော်ကို အဆုံးသတ်လိုပါ သည်။ သင်တို့အားလုံး ၊လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့ လမ်းမထက်ပေါ်သို့ ဧဝံဂေလိဟောကြားဖို့သွား ရောက်သူ အယောက်စီတိုင်းအတွက် ကျွန်ပ်အစဉ်အမြဲဆုတောင်းပေးနေသည်ကို ကျွန်ပ်ဇနီးပင်လျှင် သိနေပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အန္တာရာယ်များပြားသော နေရာဖြစ်နေ၍ဖြစ်သည်။ ကျွန်ပ်အစဉ်အမြဲ ဆုတောင်းသည်မှာ၊ “အိုအဖ ကနေ့ညဧဝံဂေလိသွားရောက်ကြမည့် အရောက်စီတိုင်းအားမစတော်မူ ပါ” ဟူ၍ဆုတောင်းလေ့ရှိ၏။ ကျွန်ပ်တို့အနေဖြင့် လွန်ခဲ့သော၃၅နှစ်လုံးလုံး မည်းမှောင်နေသော လမ်းမကြီးထက် ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောဖို့ စေလွတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အံ့ဩဖွယ်မည်သူတစ်ဦးတစ် ယောက်မှထိခိုက်အနာတရ မရှိခဲ့ကြဘူး၊
“သင်သွားလေရာရာ၌ သင့်ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ ကောင်းကင်တမန်တို့အား သင့်အဖို့မှာထားတော်မူသည်ဖြစ်၍ (ဆာလံ ၉၁း၁၁)”
ကောင်းကင်တမန်များသည် ကျွန်ပ်တို့နှင့် အစဉ်ရှိ၏!ဧဝံဂေလိသာသွားရောက်ဟောပြောပါ! ဈေး ဆိုင်ကြီးများသို့ သွားရောက်ဟောပါ! ကျောင်းအသီးသီးသို့သွားဟောပါ! လမ်းမပေါ်သို့သွားဟော ပါ! ကောင်းကင်တမန်တို့သည် အစဉ်သင်တို့နှင့်ရှိ၏! ရပ်တန့်မနေပါနဲ့! ခရစ်တော်၏အမိန့်တော် ဝန်ခံလျှက် ရှေ့သို့ချီတက်ဟောပြောပါ။ ခရစ်တော်မိန့်တော်မူသည်ကား၊
“သခင်က၊မြို့ပြင်လမ်းမခြံနားသို့ သွားဦးလော့။ ငါ့အိမ်ကိုပြည့်စေခြင်းငှာ အနိုင်အထက် ခေါ်သွင်းလော့ (လုကာ ၁၄း၂၃)။
ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များတို့ဆီသို့ သွားရောက်ဧဝံဂေလိ ဝေငှလုက်ပါ! နတ်ဆိုးများက သင့်အား မရပ်တန့်စေနိုင်ဘူး! စာတန်ပင်လျှင်သင့်အား ရပ်တန့်၍မရနိုင်ပါ! လူဒေါသအမျက်ကလည်း သင့်အားမရပ်တန့်စေနိုင်ပါ! ဘယ်အရာကမှ သင့်အားရပ်တန့်စေ၍မရပါ! ကောင်းကင်တမန် တို့သည် ကျွန်ပ်တို့နှင့်အစဉ်ရှိနေ၍ဖြစ်သည်! ဧဝံဂေလိဟောပြောပြီး ဝိညာဉ်များဆောင်ယူလာပါ! ဘယ်အရာကမှ သင့်အားရပ်တန့်၍မရပါ! ကောင်းကင်တမန်တို့သည် ကျွန်တို့နှင့်အစဉ်ရှိနေ၍ ဖြစ်သည်!
ကျေးဇူးပြု၍ ဒေါက်တာအို့စဝါ့ဒ့်ဂျေ.စမက်စ်သီကုံးသော “ဧဝံဂေလိဝေငှပါ! ဧဝံဂေလိဝေငှပါ”ဟူ သောသီချင်းစာအုပ်၏နောက်ဆုံးသီချင်းကို မတ်တပ်ရပ်၍သီဆိုကြပါစို့
စစ်ဘေးဒဏဲ် မီးတောက်မီးလျှံများကြားက လွှတ်ငြိမ်းခြင်းငှါ
နုတ်ကပတ်တော်နိုးဆော်ပေးမူပါ သခင်ခေါ်သံကို သတိမူရန်အစဉ်
ခေါ်သံတော်ကား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဧဝံဂေလိဝေငှပါ!
-ယေရှုနာမဖြင့် ကြွေးကြော်သတင်းကောင်း ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း
ကောင်းကင်ဘုံမှ ကြွေးကြော် ဧဝံဂေလိ၊ဧဝံဂေလိ ဝေငှပါ!
သခင့်ကျေးဇူး သေလုမျောပါး ပြစ်ရှိလူသားသိစေဖို့
လောကီအမှောင် ကမ္ဘာဝယ် ဧဝံဂေလိဝေငှကြကုန်စို့!
(၁၈၈၉-၁၉၈၆ခုနှစ် ၊စာသားကို ဒေါက်တာအော့စ်စဝါ့ဒ်
ဂျေ.စမက်စ်မှ ရေးသားပြီး သံစဉ်ကို(၁၇၀၇-၇၈၈)
ဗညိ ဃညေ Iအ နြ၊ သီချင်းသံစဉ်ဖြစ်သည်)။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာဂရိတန်အလ်.ချန်မှ ရှင်လုကာ ၂း၈-၁၆ကို ဖတ်ကြားပေးပါ သည်။
-ဒေသနာမတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ ဂျွန်ဆန်အုတ်မန် ဂျေအာရ် ၁၈၅၆-၁၉၂၂သီကုံးသော “သန့်ရှင်း၊ သန့်ရှင်း၊ ကောင်းကင်တမန်ကျူးဧသံ”ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆို ပေးပါသည်။